Semalt: गुगल एनालाइटिक्सबाट तपाईंको फर्म आईपी ठेगानाहरू बाहेकको महत्त्व
साना व्यवसायहरू र एसईओको लागि आफ्नो वेबसाइटहरू अनुकूलित फर्महरूले विभिन्न चुनौतिहरूको सामना गरिरहेका छन्, आन्तरिक यातायात ती मध्ये एक हो। तपाईको व्यवसायलाई रेफरर स्पाम र आन्तरिक वातावरणबाट उत्पन्न ट्राफिकले तल झारेको हेर्न यो धेरै पीडादायी हुन सक्छ।
बाह्य ट्राफिकबाट आन्तरिक ट्राफिक छुट्याउने महत्त्व राम्रोसँग पर्याप्त हाजिर पार्न सकिदैन। Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक म्याक्स बेल भन्छन् कि Google विश्लेषकले आन्तरिक ट्राफिक, अवांछित डाटा, रेफरर स्पाम, र वेबसाइट मालिकहरूको सहयोगमा द्वेषयुक्त खतरालाई फिल्टर गर्दछ। तपाईंको सहकर्मीहरू र तपाईंको वेबसाइटमा लग ईन गर्ने मार्केटर्स द्वारा उत्पन्न यातायातको प्रभावहरू ट्र्याक गर्न बेवास्ता गर्दा तपाईंको डाटालाई अत्यधिक स्केच गर्न सकिन्छ।
तपाईको अफिसबाट सुरु भएको IP ठेगानाहरूको दायरा किन फिल्टर गर्नुहोस्?
तपाइँका कर्मचारीहरू, सह-कार्यकर्ताहरू, र मार्केटिंग परामर्शदाताहरूले तपाइँको ज्ञान बिना तपाइँको अनलाइन व्यवसाय पतन गर्न सक्छ। तपाईंको व्यवसाय दृश्यता सुधार एक कुरा जुन पूर्ण रूपमा तपाईंको प्रतिबद्धताहरूमा निर्भर गर्दछ र तपाईंको लक्षित बजारमा हिट गर्दछ। तपाईंको वेबसाइटमा लग ईन गर्ने व्यक्तिहरू उनीहरूको दैनिक कार्यहरू पूरा गरे पछि फिर्ता क्लिक गर्न झुकाव राख्छन्। लामो समय मा, ती समाप्त हुन्छ तपाईको बाउन्स दरहरु, एक परिदृश्य जुन एल्गोरिदमलाई संकेत गर्दछ तपाईको कीवर्डलाई अप्रासंगिकको रूपमा।
तपाईंको गुगल एल्गोरिदमबाट आईपी ठेगानाहरू बाहेक कामदारहरूको संख्या र तपाईंको वेबसाइटमा लगइन गर्ने व्यक्तिको संख्यामा निर्भर गर्दछ। के तपाई ग्राहक वा वेबसाइटको मालिकले तपाईको गुगल एनालाइटिक्स रिपोर्टमा निर्दिष्ट ठेगानाहरू बाहेक काम गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ केहि र साधारण चरणहरू छन् जुन तपाईलाई IP ठेगानाहरू पूर्ण रूपमा रोक्न मद्दत गर्दछ।
तपाईको गुगल एनालाइटिक्समा लग ईन गर्नुहोस् र प्रशासक खण्ड चयन गर्नुहोस्
तपाईंको खाताहरू 'प्रॉपर्टी' हाइलाइट गर्नुहोस् र गुणहरू जाँच गर्नुहोस् जुन तपाईंको वेबसाइटसँग मिल्दछ
'दृश्य' स्तम्भ क्लिक गर्नुहोस् र 'फिल्टर' प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्
नयाँ फिल्टर बनाउनको लागि 'फिल्टर थप्नुहोस्' बटन ट्याप गर्नुहोस्
एक 'फिल्टर नाम' उत्पन्न गर्नुहोस् जुन तपाईं सजिलै सम्झन सक्नुहुन्छ
यस अवस्थामा, 'अनुकूलित' फिल्टर प्रकारको सट्टा 'फिल्टर प्रकार' को रूपमा 'पूर्वनिर्धारित' विकल्प प्रयोग गर्ने विचार गर्नुहोस्
फिल्टर प्रकार चयन गर्नुहोस् र 'समावेश नगर्नुहोस्' बटन क्लिक गर्नुहोस्
समावेश नगरेका आईपी ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यो तपाईं एक विशिष्ट आईपी ठेगाना बाहेक मा काम गर्दै हुनुहुन्छ
तपाईंको परिवर्तनहरू बचत गर्न 'बचत गर्नुहोस्' बटन क्लिक गर्नुहोस्
मार्केटिंग परामर्शदाताहरूका अनुसार मूल्यवान जानकारी फिल्टर गर्नबाट बच्न एक परीक्षण फिल्टरको साथ काम गर्ने सल्लाह दिइन्छ। तपाईंको डाटा फिल्टर गर्नु अघि मुख्य डाटा दृश्यमा तपाईंको डाटा छोड्ने विचार गर्नुहोस्। तपाईंको फिल्टर खोल्नुहोस् र तपाईंको वेबसाइटमा आगंतुकहरूको संख्यात्मक परिवर्तनहरू जाँच गर्नुहोस्। तपाईंको साइटमा IP ठेगानाहरूको दायरा फिल्टर गरेपछि आगन्तुकहरूको संख्या अधिक यथार्थपरक नम्बरमा झर्नु पर्छ। तपाइँको खोज इञ्जिन अनुकूलन अभियान को अन्त बाट तपाइँको लक्ष बजार मा हिर्काउन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको रेकर्डहरूले आन्तरिक ट्राफिक र रेफरर स्पाममा तपाईंको लिने सम्बन्धमा धेरै नै प्रभाव पार्दछ। गुगल विश्लेषक ट्र्याकिंग प्रयोग गरी फिल्टर आउट गरेर तपाईंको व्यवसाय वेबसाइटबाट आईपी ठेगानाहरूको दायरा समावेश गर्नुहोस्।